Uwa Nile nke uwa，dika ndu nke ndu n’ezie，di oke oke nke na o ga-ewe gi ndu ugbua ka i ghagharia ihe o bula.
Iji mee ka nkeahụbụrụeziokwu，site na ogeịmechara，ọga-abụrịrịnaịga-enwe ikeịmaliteịmaliteọzọ.
Ihe niile a maara nkeọma，mana ole n’imegịmaara naọdịnayaịna-ezute naweebụbụobereọnụmmiri icepe?
阿玛： Tupuịgan’ihu，Web的GbaraỌchịchịna-akwadoghịiwu。 N’agbanyeghịiheịna-eme，ịga-enwe ikeịnọna-amaghịaha。 Tinye na iheizendụgị!
0.5 5. Igwentanetịweebụchịkwa
N’agbanyeghịọịbu a iịi（.
Taa，ọbụotu n’imeụzọole na ole iji nweta .onionweebụsaịtị，nkedịna Web Dark.
TORbụnsụgharịnkechọgharịweebụFirefox，gbanwee iji kwe kandịọrụna-agagharịnaweebụn’enweghịaha。纳梅·恩加斯（Na-emechọgharịahụiji gbochie maọbụnyendụmọdụmegidemgbalịndịọrụiji mee ihendịnikeigosipụtanjirimara ha，dịkaịmeghachiakụmụnkewindow windo，dị.
Mgbeịna-echere TOR ibudata，wepụtaoge iji rachie otu mpempeakwụkwọkpuchie anya igwe elekere kameragị。 Ịmaghịihe nwere ike ime.
Na-lelee vidiyo nke mmeghe网站na TOR.
NetwọkNhọrọOnweGị（VPN）由savaịjikọọna iji nwetaweebụ。 Savandịna naenyere akaịchekwammalitegịma nweeikeịṅomiebe sin’ọtụtụebendịzzn’ụwa。 ụbụezie na TOR na-ekpuchi njirimaragọ，ọdịghobeezobeọnọdụgị.
Maka nd na-ejighi VPN VPN，又称ExpressVPN。 Echegbulaọbụlagodina ha nwereụbọchịụbọchị30 na-挪威-enyochaọrụha.
一个不存在的VPN可能不存在，也可能不存在。 na-agbakwunyeọkwanchebeọna datagịma zooọnọdụgị。 Biko kwadondịmgbasa ozianyị-ExpressVPN可以在nabe-emenchọgharịchỌchịrị.
Web Gbara的所有产品。 Cheta usoro nkena-emekarị：’Googlebụenyigị’？ Ọfọn，Googleanaghịedepụtasaịtịna Web GbaraỌchịchịrị，ya mere n’ebeahụ，ezigbo enyigịga-abụDuckDuckGo，nkena-arụọrụyiri ya.
Ugbu a na ddịnjikereịga，b b ogeịdebanyemakaadreesịozi-ena-enweghịike chchta。 Gmail sin’ajụjụahụpụta，ịga-achọadreesịozi-e iji deba ahaọtụtụweebụsaịtị.onion.
*Rịbaama nandịana-abịana .onion ngalaba，nkeịchọrọịnwetaiji TORnchọgharị。 Ndịnyocha oge niiledịkaChrome na Firefoxagaghịarụọrụ.
.洋葱bụngalaba ejiri kpam kpam naweebụsaịtịỌchịchịrị。 Ndịa yiri ngalaba a na-eme mgbe niile，manaenweghịikeịnwetayana-enweghịihenchọgharịpụrụichedịka TOR.
Ndịabụzụdịmma nkena-enweghịnsogbu .onionadreesịnwere ikeịnwale：
Ennnre nnukwundepụtankeweebụsaịtị.oniondịnaọna-ewe oberemgbalịchchtaha。 Ọzọkwa，buru n’uche naịnwere ikeịdabana ihendịzọ（naọzọ，nkena-akwadoghịiwu）na Web GbaraỌchịchịrị.
-na-adaụdana enwere obiụtna nkeamaghịama nandịana-adịghịakọwa，manadịkaokéosimiri na-achaanụnụanụnụ，ọtụtụihe izendụna-ezo。 Dịkaonye na-agbaọsọndụJoe（maọbụJill，dịka ikpe nwere ikeịbụ），oleeotúo sidịizendụiji nyochaa ebenrụọrụweebụgbaraọchịchịrị?
Ọbụezie na e nwere ihendịna-eme n’eziokwu naweebụnke gbaraọkpụrụkpụna gagaghịahụkarị，tinyereụfọdụn’ime ihendịọzọna-adịghịịabebịrịabeụbe ịga-esina-asụngọngọ.
将ezigbo和hejọọnandịgbara ya gburugburu nwere像patkpata nnukwu nsogbu nyegị。 Nke ana-emetụtaọbụghịnaanịndịjọọ，ma enwere ezigbo nsogbu nke nsogbu nandịmmanye iwu，dabere na ihe he na-eme.
Ọbụrụnaịkwenyeghi，ebe abụfọdụiheatụnke ihe na-aga n’ihu na ebenrụọrụweebụgbaraọchịchịrịna ihe si na yapụta;
N’afọmbụa，e boro otu di na nwunye na美国ebubo makaịreọgwụọjọọn’okpuruụlọahịaahịanke MH4Life nasaịtịd icheicheicheahịa。 Ha na-ejiweebụgbaraọchịchịrịereỌdịdị，ụdịopioid nke ana-emejọkarịd kakaọgwụntụrụndụna ihendịọzọna-adịghịmma。 E jidereụzọabụọahụn’agbanyeghịna a na-ejinkọwanzuzo，netwọkna-emepụtankeọmadịiche iche na ihendịọzọna-ezigara ya.
E jidere ihekarịrịmmadụ35在纽约na加利福尼亚站点n’akandịrụgọọmentịna-arụọrụna-ere ahia nanetwọkweebụ。 N’ime ihe ejiderekarịaegbe 100，$ 3.6 na e na na 2,000 Bitcoins.
Otu nwoke波兰人nịna-emeatụmatụna-ere otu iheatụndị英国jidere naweebụgbaraọchịchịrị。 Mgbeatụmatụyadịntakịrị，e jidere yan’Ịtaliebe onye agha ya kwuru na ya na-etuọnụnaọna-enweta ihekarịrị$ 17 nde na-ereịdọrrọụmụnwanyịna echnrụọ.
Ebeụbụnaanyịkwadoro na e nwere iheụfọdụna-emenyeụjọna-eme naweebụndịgbaraọchịchịrị，kaanyịleba anyan’ụfọdụụzọịga-esi zere ha-ọbụrna –
Ugbu a，9.0a4 nyochaa nyochana-abịaugbu a site na ntinyeakwukwọbọtịnụAlfaNchọgharị（makandịchọrọịchọpụtaatụmatụọhụrụ）.
Ion Ion IchchịgharịTordịmkpa Iji gaa nasaịtị.onion，mana ngwa niile nwere bemgfọdụ。 Gbaambọhụna ihenchọgharịTorgịdịedebe ya ruo oge magbalịaịnọgidena-eleba anya naọkwanhụsianya.
.洋葱njikọ：Ziki ezoro ezo
N’mara na e nwereọtụtụiheịweụzụtaebe a，ịga-amara naịghaghịkwụụgwọya。可以交易比特币。 Nnukwu ihedịichebụezie naọtụtụebe a na-eji obere akpa ejiji di iche icheabụghịndịna-amaghịnaọtụtụndịna-ekwenyekwara na iwu ego。 The obere akpa akpabụ… nkeọma，佐罗·埃佐.
onbụihe ijuanya naụwaga-enwechịkọta.onion，ma ebeịnọ，Facebookbụ。脸书网（kwuru na hamepụtarandịna-achọnetwọkmmekọrịtana-enweghịaha）。 Facebook上的Amaghịm na’amaghịaha’na’mmekọrịta’na-arụkọọrụmanụ。ịịịe e e edebendekọnkeọrụonyeọrụ.
比特币会给您带来更多好处，也就是您所需要的。 Ntak gagaghịenwetasaịtị一个ozugbo网站nanjikọ.onion？ Ihe na-eme kasaịtịa diche iche kar aụfọdụndịọzọbụna o nwereakwụkwọHTTPS makaadreesịya .onion!
D Googlennọọka Google nwerendịasọmpiyadịka DuckDuckGO（ọbụezie na mhụrụahaahụn’anya！）。 TORCHbụ搜索引擎dịmfe na极简主义ike nwere ikeịnwalegịbọlana-arịaọrịa鸭enyi.
ExpressVPN由虚拟专用网（VPN）托管，由虚拟专用网（nchebe nzuzo afile niile）提供。 Ntọalaya siri ike nke sava siri ike na-eti mkpuna-enweghịaha na iji kwado ya na ha ha nwereụdịọchịchịrịdabere nasaịtịha.
iPhone be be iPhone iPhone iPhone iPhone nke Macbook ma sie ikeịkwụụgwọna Bitcoin？ Enhrenhọrọn’ebe a makagị，manaụdịnanọmbadịoke。奈克·佩奇（Na-ekpuchi ekwent）尼勒·纳·梅格（neile na-emeghe）emepe ma nwee ikeịrụọrụn’ebeọbụlan’ụwa.
Makandịkwenyere nandịntaakụkọnwere onwe，web ojii nwereụdịmbipụtapụrụiche。 ProPublicabụmakandịna-amaja aka ike iji ike，nrụrụaka naụdịadịghịike。 Haabaghịuruọbụlama nwee URLyabasịraara onwe ya nye nkeịnwere ikeịnwetasite na iji ihenchọgharịTor.
Ọbụrụnaịna-achọụzọnchekwa（？）Ijizụọahịana nanntanetị，atụlaegwu，enwekwaranhọrọmakagị。 Dịkaụzọonyeọkaiwu nwere ike isi nweta ego na-aga，ya mere，ọrụESCROW。 Bitcoinbụnaọna-eme na比特币ka ihe niilebụrụihe ana-amaghị.
gozah ah naa na obigịna ihe niile hana-arịọbụego 1.5％dịmma。 Ha ga-ejide n’aka naịnwere ike nyochaa ihendịahụeji ebubo tupuịtọhapụegogịma mee ka esemokwu esemokwu nkeatọbụrụikpeahụ.
Onye Dbụlachọrọụfọdụo在na SecureDropbụkpọmkwemnkeahụ中。 Otúọdị，ọdakntakịrịkarịaizu，ebeọbụna e mere ya ka ikwe kandịna-afụụfụfụnweeụzọisi nyefeeụlọọrụụlọọrụmgbasa oha nha.
ịa a a a na na na N N Nnwere onwe nke Foundation基金会。一份来自nailez的资料，您可以在bọlan’ebeọbụla看到。 Ọbụn’ezie kpam kpam!
只是我自己，我只是ochiedịkaakụkọntanetịn’onwe ya。 Anyịahụghịndekọndekọaha nke ezigbo“ maliteụbọchị” manaanyịkwenyere naWeebụỌchịchịrịanymaara taa maliteren’afọ2000 nantọhapụnke Freenet.
Web bwu iwuna-akwadoghịịnọna Webdịomimi?
Achọpụtaghịsaịtịndịd na naweebụdịomimi site nanchọtachchchch mgbe niile。 Mkpoweebụmiri emi n’onwe yaabụghịiwuna-akwadoghị，manasaịtịfọdụnike is itinye aka na-ezighi ezi。 Isonye na mmemmendịahụnwere ikeịbụiwuna-akwadoghị.
Dịkandụn’ezie，一个不受欢迎的人，他的名字是nnnetnetịmaweebụgbaraọchịchịrịadịghịiche。 Nchedobụnkedịnaọkachasịmmaịbawanyenchebegịn’ịntanetịn’agbanyeghịiheịeme。 Otuụzọisi mee nkeahụbụ网站na iji VPN，nike nzore ip izo ya data ma zooadreesịIPgịn’anya anya。 Ch VPNta VPNkachasịmma na ederede m.
Kedu ihe ga ga-eme nawebsaịtịgbaraọchịchịrị?
Yiri web emeghe，是ddọrụịga-eme naọchịchịrịweb，na-esite na ntinye aka nannọkọọnụahịana naịchọgharịahịaahịadịn’ịntanetị。 Agbanyeghị，enwerekwa ngwongwo naọrụiwuna-akwadoghịna web ojii.
Kedu ihe ga ga-上网本
Ọchịchbargbaraọchịchịrịbụahịaana-achịkwaghịachịkwaebendịmmadụnikeịzụtanaanịiheọbụla。 Nke agụnyereegbe，ọgwụjjọọ，anụhịana-ezighi ezi，vidiyojọgburuonwe ya，paspọtụadịgboroja，akaụntụNetflix，ozikaadịkredit，maọbụụbụnamgb mgna mgb mgnamgbazinye nke onye.
IjinetwọọdụTor na-eme ka njiri maragịnkeọma，法力ọgaghịekwe omume。 VPN dmmakarịaiji zur Express nzuzo raara onwe ya nyedịka ExpressVPN.
DuckDuckGobụigwena-achọihena-akọwapụtaweebụsaịtịon.onion nkepụrụiche naweebụgbaraọchịchịrị。 Ọbụghịweebụgbaraọchịchịrịn’onwe ya。您喜欢ịnwetaDuckDuckGo naweebụgbaraọchịchịrịebe a：https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/
Ọbụrụnaịnwaleeụfọdụihedịn’isiokwua，站点na ugbu a，ịchọpụtalana ihe m nyeregịbụnsụgharịdịmma nke ihedịad We na WebWeghachị。 N’zọdoro anya，ụfọdụn’ime ihendịahụbụihe iwuna-akwadoghịnaagaghịm etinye ha ebe a.
Web GbaraỌchịchịnikeeịbụebe nnwere onwe n’ezie。 Dịkaọmụmaatụ，ịwu ye ye ye ye ye ye yeịị，，，，，，，，，，，，，，ịịịịịwu odo odo odo odo odo odo O bu ihe nwute，nke a na-etinye aka na otutu，nke oma，obugh ihe di nma.
Nwee nnwere onwe ma cheta mgbe niile，ọbụrụnaịgbalịrịịnọna-amaghịaha ma ka na-ejidegị，gaga-enyerịrịgịgwọmakaọrụọbụlana-akwadoghịnaịchọtana Weeb。 Asịkae kwuwe，ha jidereọbụnaSaddam Hussein，ọbụghịha?